Cherry Jones dia manatevin-daharana ny andiany "Dimy andro amin'ny fahatsiarovana" | Avy amin'ny mac aho
Apple TV + series mitohy mitombo. Ireo izay efa eo amin'ny takelaka fisoratana anarana dia manohy mampitombo ny vanim-potoana ary ireo izay ho avy kosa dia mitombo ny isan'ny mpilalao sarimihetsika sy mpilalao sarimihetsika izay ao aminy. Izahay koa tsy miresaka momba ny mpilalao sarimihetsika. Miresaka momba ny matihanina lehibe sy manan-danja isika izay hanome ny andiany fanatrehany lehibe kokoa sy kalitao avo kokoa. Ny penultimate hiditra amin'ny Apple TV + dia tsy nampino anao Cherry Jones amin'ny "Dimy andro amin'ny fahatsiarovana"
Ilay mpandresy loka Emmy sy Tony, Cherry Jones, dia nanatevin-daharana ny mpilalao Apple TV + andian-tantara "Five Days at Memory." Izy no hilalao an'i Susan Mulderick, talen'ny mpitsabo mpanampy ao amin'ny Hopitaly Fahatsiarovana ary filohan'ny komity fiomanana maika hoy ny The Hollywood Reporter. Taorian'ny rivodoza Katrina dia lasa komandin'ny voatondro ho an'ny hopitaly izy.
Jones, dia fantatra amin'ny asany Miaro an'i Jakôba, "Fifandimbiasana" ary "Ny tantaran'ny ankizivavy", manatevin-daharana ny mpikambana mpilalao efa misy Vera Farmiga, Cornelius Smith Jr. ary Adepero Oduye. John Ridley sy Carlton Cuse dia mampifanaraka sy mamokatra andiany. Ankoatr'izay, samy hitarika ny fizarana tsindraindray. Fink, mpanoratra ny boky, dia ho mpamokatra amin'ny andiany.
"Dimy andro amin'ny Fahatsiarovana" mitantara ny vokatry ny Rivo-doza Katrina amin'ny fomba fijerin'ny hopitaly New Orleans Memorial. Miorina amin'ny tantara nosoratan'i Sheri Fink, mpandresy tamin'ny Pulitzer Prize, ny andiany dia mandinika ireo olana ara-pitondran-tena sy etika ananan'ireo mpilalao mandritra ny fitsapana.
Tsikelikely, Apple TV + dia manao zavatra tsara sy isan'andro amin'ny tabilao misy andiana horonantsary fanadihadiana ary sarimihetsika. Betsaka ny sisa tavela nefa ny arabe dia misava ary Mazava ho azy fa amin'ny kalitao dia tsy ho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Cherry Jones dia manatevin-daharana ny andiany "Dimy andro amin'ny fahatsiarovana"
Apple dia nandroaka ekipa fanaovana sonia farany momba ny fanehoan-kevitra diso momba ny vehivavy